स्वास्थ – Ram Kumar Pariyar
Current Page Parent अन्य
Current Page: स्वास्थ
पेटको बोसो घटाउन यसो गर्ने
शरीर मोटाउने हुँदा धेरैजसो सबै तौल पेटमा जम्मा हुने गर्छ । कसैको शरीरको तौल ठिक्क भए पनि पेट मात्र बढ्नु सामान्य नै हो। पेट बढ्नाले आकार ठूलो हुने लुगा टाइट गराउने, नराम्रो देखाउनुका साथै पेटमा बोसो जमेर स्वास्थ्यलाई समेत नकारात्मक असर पुर्‍याएको हुन्छ। पेटमा...
२०७२ जेष्ठ ३०
के तपाईंलाई ब्लड प्रेसर छ ? अत्यावश्यक जानकारी पढौँ ।
*ब्लड प्रेसर के हो ? छाती छाम्यो भने पनि प्रस्ट थाहा हुन्छ । अझ कसैको छातीमा कान टाँसेर सुन्यो भने त ठूलै आवाजले भड्केको सुनिन्छ मुटु । हाम्रो बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई मुटु चलेको भनिए पनि वास्तवमा त्यो मुटुले रगतलाई शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउनका लागि...
२०७२ बैशाख १८
अहिलेको अवस्थामा नगरी नहुने कुराहरु-सावधानी
अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा सबैले यी सावधानी अपनाउँ । स्वास्थ नै धन हो,आफू स्वस्थ रहे मात्र जीवन रहन्छ । १. पानी उमालेको मात्र खानुहोला , सम्भव नभएमा पियुष,क्लोरिन चक्की आदि राखेर भएपनि पानीलाई शुद्ध बनाएर सेवन गर्नुहोला । २. ताजा र थोरै थोरै अर्थात पच्ने...
२०७१ फाल्गुन २५
रक्सी पिउनुस,हर्टअट्याकबाट बच्नुस-एक अध्यन
एजेन्सी । रक्सि पिउने मानिसलाई समाजमा नकारात्मक रुपमा हेर्ने गरिएको छ । तर एक अध्ययनका अनुसार रक्सि पिउदा फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । युरोपियन हर्ट जर्नलमा प्रकाशित शोधका अनुसार नियमित रुपमा एक पेग रक्सि सेवन गर्ने पुरुषलाई हर्टअट्याकको जोखिम अपेक्षाकृत रुपमा कम हुने...
२०७१ फाल्गुन १४
स्वाईन फ्लुबाट कसरी बच्ने ?
सन् २००९ ताका माहामारीका रुपमा फैलिएको स्वाइन फ्लुको प्रकोप पुनः देखिन थालेको छ । सन् २०१५ मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा यस रोगबाट ८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १४ हजारभन्दा बढी संक्रमित बनेका छन् । नेपालमा पनि हालसम्म ५ जना यस रोगबाट संक्रमित...
बियर पिउनुको दश फाईदाहरु
तपाई वियर पिउनु हुन्छ ? पिउनु हुन्छ भने राम्रो । तर पिउनु हुन्न भनेपनि तपाइँलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने...
अव्यवस्थित जीवनशैली र गलत खानेकुराको उपहार हो पेटको बोसो । पेटको बोसो धेरै मानिसहरुका लागि याद राख्ने ठाउँ बनेको छ । यसले तपाईंको व्यक्तित्व मात्र खराब नगरि धेरै प्रकारको रोगको शिकार बनाउन सक्छ । पेटको बोसो घटाउनका लागि यो आयुर्वेदिक पद्धति अपनाउनुहोस् । दिनको...
शरीरमा रस एवं रगतमा उपस्थित विजातीय तथा अनावश्यक तत्वलाई पिशाबबाट बाहिर निकाल्ने काम किड्नी (मृगौला ) ले गर्दछ । प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ किडनीसँग दिनहुँ ६० किलो जति पानी छान्ने क्षमता हुन्छ । फेरि पनि सामान्य रुपमा किड्नीले २४ घण्टामा एकदेखि दुई लिटर पिशाब बनाएर...
तपाईंको दाँत पनि सौन्दर्य को एक अभिन्न पाटो हो । जोकोही को झट्ट आँखा पर्ने अंग पनि भएकोले यसको सफाईमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । भित्री अंग भए पनि बाहिर देखिई रहने भएकोले नियमित सफाई र विशेष ध्यान दिन अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ...
रोग-विराम कहाँ , कतिबेला हुन्छ कसैलाई थाहा हुदैन । हुन त रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा लाग्नै नदिनु बुद्धिमता हो। तर पनि काँचो शरीर को भर हुदैन । गाउँघर तिर सानो तिनो रोग लागे मा घरायसी औषधि र जडिबुटी प्रयोग गर्ने तथा झारफुक समेत...